The Caring Trap, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waligey naftayda uma tixgalin inay indho indheeyaan runta. Laakiin waxaan qirayaa inaan u beddelo kanaal ku saabsan dukumiintiyada xayawaanka ah markii warku yahay mid aan loo dulqaadan karin ama muuqaallo filimaan ah oo aan bannaaneyn oo aan xiiseyneyn. Waxaa jira wax runtii fiican oo kusaabsan daawashada ciyaartooyda ciyaarta qabata xayawaanka duurjoogta ah markii loo baahdo, mararka qaarna loola dhaqmo si caafimaad ahaan, iyo xitaa u guurista dhammaan xoolaleyda meel kale oo ay bey'addu siiso xaalad nololeed ka wanaagsan. Ciyaarayaashu badanaa waxay noloshooda khatar geliyaan haddii libaaxyada, hibisada iyo wiyisha ay la yaabaan. Dabcan way ku wada shaqeeyaan kooxo tallaabo walbana waa loo qorsheeyay oo lagu fuliyaa qalabka lagama maarmaanka u ah. Laakiin marmarka qaarkood waxay ku taalaa geeska jilibka in dawayntu sifiican u dhammaanayso.
Waxaan xasuustaa ficil si gaar ah loo qorsheeyay oo lagu guuleystay. Koox khubaro ah ayaa "dabin" u dhigay xoolo daaqsimeed oo ay ahayd in loo raro meel kale. Halkaas waa inay ka heshaa dhul daaq wanaagsan oo ay la gasho xoolo kale si kor loogu qaado hidde-sideeda. Waxa runtii indhahaygu qabteen waxay ahayd sida ay ugu guuleysteen xoolo xoolo duurjoogta ah oo dhaqso u ordaya si ay u galaan geeyayaasha sugaya. Tan waxaa lagu sameeyay dhismaha caqabadaha dharka ah oo ay ulahaayeen ulo. Xayawaanka si tartiib tartiib ah ayaa loo xiraa si si tartiib ah loogu riixo geeyayaasha gaadiidka sugaya.
Qaarkood waxay cadeeyeen inay adagtahay qabashada. Si kastaba ha noqotee, nimanku isma aysan dhiibin ilaa xayawaanku si nabad ah ugu hoydeen gaadiidleyda. Waxaa markaa mudan in la arko sida xayawaanku loogu sii daayay guryahooda cusub, halkaas oo ay ugu noolaan karaan si xor ah oo ka fiican, in kasta oo ayan xitaa ka warqabin.
Waxaan arki karay inay isla siman yihiin ragga badbaadiya xayawaankani iyo Abuuraheenna jacaylka leh ee nagu hoggaamiya jidka helitaanka badbaadada weligeed ah. Si ka duwan antelope-ka Eland ee keydka ciyaarta, waxaan ka warqabnaa barakada Ilaahay noloshaan iyo ballanka nolosha weligeed ah.
Cutubka koowaad ee buuggiisa, nebi Ishacyaah wuxuu ka cabanayaa jahliga dadka Ilaah. Dibigu, wuxuu qoraa, wuu yaqaanaa sayidkiisa dameerkuna wuu yaqaanaa weelka sayidkiisa; laakiin dadka Ilaah ma oga oo innaba ma gartaan (Ishacyaah 1,3). Malaha tani waa sababta Kitaabku inta badan noogu yeedho ido, waxayna umuuqataa in idaha aan ka mid ahayn xayawaanada ugu caqliga badan. Inta badan waxay u maraan jidkooda si ay u helaan quudin ka sii wanaagsan, halka adhijirka yaqaan sida ugu wanaagsan ay ugu hoggaamiyaan dhulka daaqa ugu wanaagsan. Idaha qaarkood waxay jecel yihiin inay naftooda ku raaxeeyaan dhulka jilicsan oo ay dabaqa u beddelaan niyad jab. Natiijo ahaan, way adkaadaan oo ma sii istaagi karaan. Marka waa layaabna ma leh in isla nebi uu ku qoray cutubka 53,6: "Kulligood sidii lax bay u lumeen."
Sida saxda ah ee aan u baahanahay Ciise wuxuu naftiisa ku tilmaamay inuu yahay "Adhijirka wanaagsan" ee ku jira Yooxanaa 10,11, 14 iyo. (Luukos 15) wuxuu sawirayaa sawirkii adhijirka ee guriga la yimid isagoo lugaha lumay garbihiisa, isagoo ku faraxsan inuu dib u helay. Adhijirkayaga wanaagsan ma inagu dhufan doono haddii aan sidii adhi u hallaabaan. Iyada oo la adeegsanayo tilmaamo taxaddar leh oo taxaddar leh oo ka yimaada Ruuxa Quduuska ah, ayuu dib noogu soo celiyaa wadada saxda ah.
Naxariistii Ciise Butros wuu ka naxariis badnaa, kaasoo saddex jeer beeniyey! Wuxuu ku yidhi "quudi baraarkayga" iyo "Idahayga daaji". Wuxuu ku casuumay Thomas shakiyey: "Fartaada soo gudub oo arag gacmahayga, ... ha noqon mid cajiib ah, laakiin rumayso". Ma jiraan ereyo adag ama aflagaado ah, tilmaam cafis ah oo ay weheliso caddeyn aan laga fiirsan karin oo ah sarakiciddiisa. Taasi waxay ahayd dhab ahaan waxa uu Thomas u baahnaa.
Isla adhijirkii wanaagsanaa wuu garanayaa sida saxda ah ee aan ugu baahanahay inaan kusii nagaano daaqa wanaagsan mar walbana wuu naga cafiyaa hadii aan khaladaad doqonimo la mid ah sameynno. Isagu wuu jecel yahay meel kasta oo aan ku lumno. Waxay noo oggolaaneysaa inaan baranno casharrada aan u baahan nahay. Mararka qaarkood casharada waa xanuun badan yihiin, laakiin isagu weligiis nama tanaasuliyo.
Bilowgii abuurista, Ilaah wuxuu rabay in aadanuhu xukumo xayawaankan meeraha jooga oo dhan (Bilowgii 1:1,26). Sida aan ognahay, waalidkeenna weyn waxay go'aansadeen inay iyagu iska maraan, si aanan weli u arkin in wax walba ay ka dambeeyaan dadka (Cibraaniyada 2,8).
Markuu Ciise soo noqdo si uu wax walba u soo celiyo, dadku waxay heli doonaan xukunka uu Eebbe iyaga ugu talo galay.
Ciyaartoyda ciyaarta oo lagu tusay inay ka shaqeeyaan shaqada TV-ga ayaa xiiso weyn ka qabtay hagaajinta nolosha xayawaanka duurjoogta ah ee halkaa ku nool. Waxay ku qaadataa heshiis xoog leh in lala wareego xayawaanka adigoon dhaawacmin. Farxadda muuqata iyo qanacsanaanta ay ka soo hooyeen ficilkii lagu guuleystay ayaa waxaa ka muuqatay wajiyada gilgishay iyo gacan qaadid.
Laakiin miyaa la barbar dhigi karaa farxadda iyo farxadda dhabta ah ee noqon doonta markii Ciise Adhijirka wanaagsan dhammeeyo "hawlgalka badbaadinta" ee boqortooyadiisa? Miyey isbarbar dhigi kartaa dib-u-dejinta dhowr degmo oo dhul-gariir ah, kuwaas oo fiicnaan doona dhowr sano, iyo badbaadinta balaayiin dad ah weligood weligood? Dhab ahaantii maya!